Se2t को साथ B2B लिंक भवन: एसईओको पवित्र ग्रिल
अधिक व्यक्ति ईन्टरनेटमा खोज ईन्जिनको माध्यमबाट तिनीहरूको खोज सुरू गर्दछ - B2B मा पनि। एक पृष्ठ -१ रैंकिंग, यसैले, शीर्ष प्राथमिकता छ। तर कसरी ? लिंकहरू यहाँ कुञ्जी देखिन्छन्। लिंक लि्क यी लि get्कहरू प्राप्त गर्नका लागि एक राम्रो तरिका हो, जुन एसईओको लागि यति महत्त्वपूर्ण हो।
तर यो के हो, र यसले बी2बीमा काम गर्दछ? यस लेखमा, तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि एसईओ का लागि कस्ता महत्त्वपूर्ण लि links्कहरू छन्, तपाईं कसरी ब्याकलिks्कहरू निर्माण गर्ने व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, र किन यति सफल हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं एसईओको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन। Semalt को पेशेवर सेवा तपाइँको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दतको लागि २//7 उपलब्ध छ।
लिंक भवन भनेको के हो?
लिंक निर्माण वा ब्याकलिks्कको जेनरेटको अर्थ तपाईंको वेबसाइटमा बाह्य साइटहरू (उदाहरणका लागि अन्य कम्पनीहरू, ब्लगहरू, मिडिया, आदि) बाट सकेसम्म धेरै लिंकहरू प्राप्त गर्नु हो।
Google मा लक्ष्य एक उत्तम र्याकिंग हो। किनकि वेबसाईटमा धेरै सान्दर्भिक लि links्कहरूले खोजी ईन्जिन देखाउँदछ कि त्यहाँ सामग्री राम्रो छ र खोजीकर्ताहरूको लागि रोचक छ।
धेरै राम्रा ब्याकलिks्कहरूले वेबपृष्ठमा उच्च अधिकारको लागि पनि नेतृत्व गर्दछ। यो बाह्य लिंकहरू मार्फत बढ्छ, त्यसैले गुगलको प्रतिष्ठामा बोल्न। लिंक निर्माणलाई यस अर्थमा डिजिटल सिफारिश मार्केटिंग भन्न सकिन्छ।
अर्को लक्ष्य तपाईंको न्यूजलेटर वा गुगल बाहेक नयाँ यातायात स्रोतहरू विकास गर्नु हो। तपाईंको साइटमा मिडियाबाट लिंकहरू यसका लागि पूर्वनिर्धारित छन्, किनकि मिडिया वेबसाइटहरू आफैंले धेरै यातायात उत्पादन गर्छन्, लिंक गरेर तपाईं यसबाट केहि प्राप्त गर्नुहुन्छ।
B2B लिंक निर्माण पनि सार्थक लगानी हो। यद्यपि तपाइँ B2C भन्दा फरक कोटीहरूमा सोच्नु पर्छ। यहाँ लक्ष्य उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिks्कहरू हुनुपर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटसँग थिमेटिक फिट हुन्छ।
बाह्य लिंकहरू - अर्थात् अर्को डोमेनबाट तपाईंको आफ्नै सन्दर्भ - आन्तरिक लिंकहरू भन्दा फरक - लिंक जुन तपाईंले तपाईंको डोमेन भित्र सेट गर्नुभयो। हामीले यसमा सबै वर्णन गरेका छौं हाम्रो ब्लगमा विषय कि म तपाईलाई खोज्न आमन्त्रित गर्छु।
यसैले ब्याकलिks्क खतरनाक हुन सक्छ
विगतमा, यो संसारभरिका SEO द्वारा व्यापक शोषण गरिएको छ। लिंक एक्सचेन्ज (विभिन्न वेबसाइटहरूको पारस्परिक लिinking्क) र लिंक खरीद गरियो। (वेबसाइटहरू केवल अरूसँग लिंक गर्नको लागि सिर्जना गरिएको थियो जुन बदले उनीहरूलाई भुक्तानी गर्‍यो।)
किनभने जब ब्याकलिks्कको कुरा आउँछ, त्यस अवधिमा, गुणस्तरको सट्टा मात्रा। अधिक लिंकले एक वेबसाइटमा स pointed्केत गर्दछ, यो Google मा माथि उचालियो। ब्याकलिks्कहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रमबद्ध कारक थिए।
गुगलले चाँडै नै यी खेलहरू रोक्न लगायो र पुग्न खरीद भयो। पेन्गुइन अपडेटको साथ (गुगल एल्गोरिथ्ममा परिवर्तन), शंकास्पद र अविश्वसनीय लिंकहरू - अर्थात् खरीदयोग्य लि links्कहरू वा बल्क लिंकहरू - अचानक नकरात्मक मूल्या rated्कन गरियो।
SEO हरू प्रायः यहाँ "खराब छिमेकी" को कुरा गर्छन्। अद्यावधिकको नतीजा: श्रेणीकरण स्थानहरू आंशिक रूपमा पुन: नियुक्त गरियो। पहिले खोज परिणामहरूका अघिल्ला व्यक्तिहरूले ठूलो मात्रामा हराए यदि उनीहरूले अशुद्ध ब्याकलिंक्सहरूको माध्यमबाट पोल स्थिति उत्पन्न गरे।
आज खोजी ईन्जिन एल्गोरिदमहरू यति बुद्धिमान छन् कि यदि यो वेबसाईटले "खराब छिमेकी" बाट ब्याकलिks्क पायो भने यो सजिलै देखिन्छ। यसैले तपाईको पृष्ठमा लिंकहरू सफा गर्न सल्लाह दिइन्छ किनकि यदि तपाईंले नकारात्मक ब्याकलिksक्स सक्रिय रूपमा उत्पन्न गर्नुभएको छैन भने, यी कहिलेकाँही देखा पर्दछ।
क्वालिटीको सट्टा क्वालिटी निश्चित रूपले ब्याकलिंक व्यवसायमा विगतको चीज हो - B2B लिंक भवनको लागि एक लाभ
यस बिन्दुमा हामी शंकास्पद लि link्क सौदाहरूको बिरूद्ध कडा सल्लाह दिन्छौं। किनभने यदि गुगलले तपाईंलाई सजाय दिन्छ भने, यो तपाईंको रैंकिंग परिणामहरूको लागि घातक हुनेछ। तिनीहरूलाई पुनर्निर्माण कठिन, समय खपत, र महँगो छ।
जे होस्, ब्याकलिks्कहरू अझै श्रेणीकरण र पृष्ठ प्राधिकरणको लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छन् - अर्थात् प्राधिकार वा मान जुन Google ले तपाइँको वेबसाइटलाई तोक्दछ। (विकिपेडिया, बीबीसी, वा Spiegel.de, उदाहरण को लागी, एक उच्च स्तर को अधिकार छ।)
अवश्य पनि, तपाइँको कम्पनी वेबसाइट सामान्यतया कम थोरै ब्याकलिंक्सबाट फाइदा लिन्छ र सामान्यतया कम अधिकार पनि हुन्छ। जे होस्, त्यो चीजहरूको प्रकृतिमा हुन्छ। B2B शीर्षकहरू कम व्यक्तिहरूमा कम चासोको हुन्छन्, उदाहरणका लागि जुत्ताहरूका लागि अनलाइन शप।
जे होस्, त्यसले तपाईंलाई B2B लिंक निर्माणमा लगानी गर्नबाट रोक्दैन, किनभने तपाईंले खोज्न चाहानु भएको कुञ्जी प्रायः प्रतिस्पर्धी हुँदैन। राम्रो ब्याकलिks्कको साथ, वेबसाइटको लागि गुगलमा प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन र उत्तम क्रममा राख्न सजिलो हुन्छ।
उच्च प्राधिकरणको साथ पृष्ठहरूबाट ब्याकलिks्कहरू तपाईको साइटको लागि अज्ञात वेब पृष्ठहरूबाट भन्दा अधिक मूल्यवान छ। यसको विपरित, प्रसिद्ध र प्रतिष्ठित वेबसाइटहरूका लिंकहरूले पनि कसैको अधिकार बढाउँछन्।
कथित रूपमा, ब्याकलिks्क अब रैंकिंगको लागि महत्त्वपूर्ण छैन
पेन्गुइन अपडेटको अर्को अनुमान गरिएको परिणाम थियो: गुगलले घोषणा गर्‍यो कि यसले रैंकिंगमा ब्याकलिंक्सको मान डाउनग्रेड गर्नेछ। ब्याकलिks्कले अब राम्रो पृष्ठमा अनुकूलन को रूप मा एक राम्रो रैंकिंग मा यति प्रभाव हुनु हुँदैन।
तर अह्रेफद्वारा गरिएको एक अध्ययन, गुगलले यसको विपरित बयानको बाबजुद पनि भिन्न नतिजामा आएको हो: अध्ययनले स्पष्ट पार्दछ कि ब्याकलिks्कले पृष्ठमा कारकहरू भन्दा भिन्न कुञ्जी शव्दहरूमा रैंकिंगमा उल्लेखनीय रूपमा उच्च प्रभाव पार्दछ।
ब्याकलिks्कले कसको पृष्ठ १ मा पुग्ने निर्णय गर्दछ। राम्रो सामग्रीले निर्णय गर्दछ कि पृष्ठ १ मा को रहन्छ!
ब्याकलिks्कहरूले जहिले पनि सहयोग गर्दैन।
यद्यपि, निम्न सत्य हो: एक वेबसाइटको लागि जुनसँग पहिले नै धेरै राम्रा ब्याकलिks्कहरू छन् र यसैले पहिले नै गुगलबाट धेरै विश्वास र अधिकार छ, ब्याकलिks्कहरू होली ग्रिल होइनन्। यी वेबसाइटहरू अझ विशेष ध्यान र अद्वितीय सामग्री र एक उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव मा अधिक ध्यान दिन छ।
किनकि यस सन्दर्भमा, तपाईं उच्च गुणवत्ता एसईओ लिंक कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ जुन अनलाईन शपमा उत्पादनको राम्रो समीक्षाको समान छ: धेरै हजार सकारात्मक समीक्षाको साथ, अर्को राम्रो मन्दी सम्भावित खरीददारको धारणाको लागि यत्तिको निर्णायक हुँदैन। जहाँसम्म, यदि उत्पादसँग केवल १ reviews समीक्षाहरू छन्, जसमध्ये also बरु सामान्य हुन्, अर्को प्रशंसनीय मन्दीले ग्राहकको धारणा बदल्न सक्छ।
त्यहाँ कस्ता प्रकारका ब्याकलिंकहरू छन्?
सबै लिंकहरू समान बनाइने छैनन्। यसले फरक पार्छ जुन तपाईंको डोमेनको URL मा लिंक गरिएको छ, अर्थात् बाह्य पृष्ठले तपाईंको गृह पृष्ठ वा समाचार पोस्टलाई सन्दर्भ गर्दछ। पृष्ठ को अधिकार एक भूमिका खेल्छ र लि links्क पनि टेक्निकल रूपमा फरक हुन्छ।
कुन लिंकले ल्याउने?
संक्षेपमा: सबै लि links्कहरू जुन सम्मानित बाह्य साइटबाट तपाईंको वेबपृष्ठमा सन्दर्भ गर्दछ महत्वपूर्ण छ। यद्यपि यस प्रकारको महत्वमा भिन्नताहरू छन्।
उत्पत्ति: तपाईंको पृष्ठमा लिंक गर्ने पृष्ठको अधिकार अधिक, लि the्क रैंकिंगमा अधिक प्रभाव पार्दछ। यसको विपरित रूपमा, निम्नमा पनि लागू हुन्छ: पृष्ठ (अधिक) ब्याकलिks्कहरू लिन्छन्, यसको अधिकार उच्च हुन्छ।
प्लेसमेन्ट र लक्ष्य: तपाईको वेबसाइट वा पोष्ट बाह्य पृष्ठमा लिंक भएकोले यसले फरक पार्दछ। उप पृष्ठमा एक ब्लग पोष्ट शुरू पृष्ठको रूपमा लिंक प्रदायकको रूपमा त्यति मूल्यवान छैन। यसले होम पेज वा उप पृष्ठमा लिंक छ कि छैन त्यसमा पनि भूमिका खेल्दछ।
NoFollow: "लिंकहरू अनुसरण नगर्नुहोस्" यसको मतलब तिनीहरू Google द्वारा पछ्याईएको छैन, र त्यसैले मूल्या rated्कन गरिएको छैन। विकिपेडिया, उदाहरणका लागि, सँधै NoFollows सेट गर्दछ, किनकि प्लेटफर्ममा ठूलो अधिकार छ, यद्यपि मूलतः कोही पनि त्यहाँ पोष्ट गर्न सक्दछन्। यदि विकिपेडियामा '' फलो '' लिंकहरू छन् भने, धेरै योगदानहरू सकेसम्म धेरै लिंकहरू राख्न त्यहाँ पोष्ट गरिनेछ।
जे होस्, जब यो विशेष रूपमा कुनै पछाडि आउँदैन, एसईओ आत्माहरू विभाजित हुन्छन्। यो प्रमाणित भएको छैन कि NoFollow लिंकले रैंकिंगलाई असर गर्दैन।
प्लेसमेन्ट: यदि तपाईं गुगललाई आउटस्मार्ट गर्न चाहानुहुन्छ र एक पृष्ठ बनाउनु हुन्छ जसमा तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा अनगिन्ती लिंक राख्नुहुन्छ भने, तपाईं दुर्भाग्यवस, केहि पनि प्राप्त गर्नुहुने छैन। म फेरि जोड दिन्छु कि गुगल एल्गोरिथ्म सधैं जहिले पनि यसलाई अपहरण भइरहेको बेलामा हेर्दछ। कृपया तपाईंको अवस्थित रैंकिंगलाई जोखिममा नपार्नुहोस्।
यो ब्याकलिks्क जस्तै छ। यदि पृष्ठ पहिले नै धेरै छ भने, अतिरिक्त एसईओ लिंक अब रैंकिंगको लागि निर्णायक हुँदैन। यद्यपि, यदि वेबसाइटमा सम्मानित साइटहरूबाट धेरै थोरै सम्बन्धित ब्याकलिks्कहरू छन् भने, अर्को साइट लिंक गरिएको साइटको श्रेणीकरणको लागि निर्णायक हुन सक्छ।
B2B लिंक निर्माण: कसरी ब्याकलिks्क उत्पन्न गर्ने?
सबै भन्दा पहिले, backlinks को आधारशिला राम्रो सामग्री मार्केटिंग हो। यदि तपाईंसँग उच्च-मूल्यको सामग्री र लक्षित समूह-विशिष्ट शीर्षकहरू छन् भने, तपाईं समयसँगै केही ब्याकलिंकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी यदि सामग्री धेरै जटिल छ (अध्ययन, केस स्टडी, इन्फोग्राफिक्स, आदि) वा उपन्यास (एक बिषयको पूर्ण नयाँ, असामान्य प्रकाश), सम्भावना बढी छ कि अन्य ब्लगहरूले तपाईंको पोष्टलाई सन्दर्भ गर्दछ।
तर म तिमीलाई धोका दिन चाहान्दिन। धेरै जसो केसहरूमा यो पर्याप्त छैन। हाम्रो SEO विशेषज्ञहरु तपाइँले कसरी B2B लिंक भवन पुश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे6सुझावहरू छनौट गर्नुभएको छ।
B2B मा ब्याकलिks्कहरूको लागि tips सल्लाहहरू
१. अतिथि पोष्टहरू
अतिथि पोष्टहरू अधिक ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्ने एक तरीका हो। विषयवस्तु उचित ब्लगमा तिनीहरूलाई पोस्ट गर्नुहोस्। अतिथि योगदानहरू सार्थक छन्, तर तिनीहरू जटिल छन् र प्रारम्भिक कार्यको आवश्यक छ।
यदि तपाइँ सक्रिय रूपमा पाहुना ब्लग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले निम्न गर्नुपर्दछ: विषयगत रूपमा उचित ब्लगहरू खोजी गर्नुहोस् जुन तपाइँको लेखन शैली, तपाइँको विषय र पाठकसँग तपाइँको दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो छ र साथै तपाइँको ब्ल्गको रूपमा पाठकको लागि समान उपयोगिता छ।
तपाईको कर्पोरेट ब्लग बिना नै तपाई बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ ब्लग। उदाहरण को लागी, ह्वाइटपेपर वा प्रकाशनका लागि केस स्टडी प्रस्ताव गर्नुहोस्। तपाईंले दिमागमा दुई बुँदाहरू राख्नु पर्छ:
अतिथि ब्ल्गको सामग्री उपयुक्त रूप मा तपाइँका शीर्षकहरु मिल्नु पर्छ। किनकि ब्याकलिks्कको बाहेक, तपाईं त्यहाँ ट्राफिक पनि उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसले तपाईलाई लामो अवधिको लागि मात्र ल्याउँदछ यदि यो तपाइँको लक्षित समूह हो भने तपाइँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ।
कुनै डुप्लिकेट सामग्री छैन: यो पनि एक कारक हो जुन Google द्वारा सामग्री चोरी रोक्न सजाय दिइन्छ। यदि तपाईं अन्य ब्लगमा पोष्टहरू प्रकाशित गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ पाठहरू तपाईंको वेबपृष्ठमा भन्दा फरक छन्।
२. गुणस्तर सामग्री: इन्फोग्राफिक्स, भिडियो र अध्ययन
उच्च गुणस्तर र अधिक जटिल सामग्री, अधिक सम्भावना यो छ कि अन्य मार्केटरहरूले तपाईंको सिर्जना गरिएको सामग्रीमा लिनेछन्। विशेष गरी जब ब्लगिंग, तपाईं सक्रिय रूपमा आफ्नो सामग्री प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंले अर्थपूर्ण ग्राफिक सिर्जना गर्नुभयो वा बजार अनुसन्धान प्रयोग गरेर आफ्नै अध्ययन उत्पन्न गर्नुभयो? त्यसो भए तपाइँको सामग्री यसको आफ्नै वायरल हुन प्रतिक्षा नगर्नुहोस्। किनभने दुर्भाग्यवश, त्यो केसहरूको दुब्लोमा हुन्छ।
यो सक्रिय रूपले सामग्री बीउ गर्नु र अन्य परिणामहरू अन्य ब्लगरहरू, मिडिया, र कम्पनीहरूमा नि: शुल्क प्रयोगको लागि प्रस्ताव गर्नु उत्तम हो। यसको लागि मूल्य एक ब्याकलिink्क हो, सामान्यतया एक उच्च-गुणवत्ता र उपयुक्त वातावरणबाट।
तपाईंको लागि, यो केवल Google को बढावा होईन तर यो पनि आवश्यक छ भने, सही स्थानबाट दर्जी बनाइएको ट्राफिक, B2B लिंक भवनमा उपेक्षित हुन नहुने एक कारक।
सौंदर्यशास्त्रमा ध्यान दिनुहोस्। सामग्री उच्च-गुणवत्ता ग्राफिक्सको साथ तयार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र यो अन्य कम्पनीहरूद्वारा प्रयोग गरिनेछ।
Bro. टुटेको लिंक भवन
थोरै गहन र प्राविधिक विकल्प भनेको टुटेको लिंकमा उफ्रिनु हो। यहाँ तपाईं उपयुक्त सामग्री वातावरणमा भाँचिएको लिंकहरूको खोजी गर्न जानुहुन्छ र त्यसपछि त्रुटि सन्देशहरूको सट्टामा तपाईंको (कार्यरत) सामग्री प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ यति धेरै छन्, धेरै लि links्कहरू समयको साथ वेबबाट गायब हुन्छन्। यो पनि हुन्छ कि वेबसाइटहरूमा पुराना पोष्टहरूले सामग्रीको सन्दर्भ गर्दछ जुन अब अवस्थित छैन। यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा काम गर्ने पोष्टहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, यो विच्छेद भएका लिंकहरूको प्रयोगकर्तालाई निम्न लाभहरू छन्:
श्रेणीकरण खतरामा छैन: डोमेनमा धेरै नै बिग्रेको लिंकले प्रायः क्रमबद्धको नोक्सान निम्त्याउँछ, किनकि यो गुगलको लागि राम्रो संकेत होइन।
प्रयोगकर्ता सजिलैसँग र चाँडै तपाईंको लिंक प्रयोग गरेर यो लिंकलाई आदानप्रदान गर्न सक्दछ।
अवश्य पनि, यो आवश्यक छ कि तपाईंको सामग्रीले प्रस fits्ग पनि फिट गर्दछ। यदि एक विशेष उपयुक्त वेबसाइट वा एक विशेषज्ञ लेखक को सामग्री उपलब्ध छ, तपाईं पनि सामग्री बनाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यो ब्याकलिंकको लागि। यो कुनै पनि हिसाबले बेकार छैन, किनकि कुनै पनि केसमा तपाईले राम्रो सामग्री बनाउनु हुन्छ।
तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ SEO उपकरणहरू जस्तै AutoSEO, पूर्ण एसईओ, र Ahrefs सबै अन्य पृष्ठहरू फेला पार्न जुन ती समान 4०4 त्रुटिमा लिंक छन्।
राम्रो टिप्पणी महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले चिप्लनु हुँदैन र यो मुख्य रूपमा लिंकको बारेमा होइन जुन तपाईं टिप्पणीमा आफैंलाई पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तर आफैलाई अझ राम्रो बनाउने र अन्य लेखकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने बारेमा।
जब B2B शीर्षकहरूको कुरा आउँछ, त्यहाँ प्रायः प्रमुख मुष्ठ लेखकहरू छन्। राम्रो सामग्री को अतिरिक्त, नेटवर्किंग र जागरूकता महत्त्वपूर्ण छ। यो पछि आफैलाई लिंक गर्न सजिलो बनाउँदछ।
अन्तर्वार्ता अधिकार प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो। यो केवल डोमेन प्राधिकरणको बारेमा मात्र होइन, तर ब्रान्ड र लेखक अधिकारको बारेमा पनि हो। व्यावसायिक साक्षात्कार को माध्यम बाट, तपाईं एक विशेषज्ञ को रूप मा स्थापित र एक सकारात्मक backlink बाट लाभ हुनेछ।
सोचाई नेतृत्व प्रोफेशनल विश्वसनीयता को लागी एक जादू शब्द हो। तपाईको कम्पनीका विज्ञहरु लाई बोल्न र उपयोगी र चाखलाग्दो अन्तर्वार्ता लिन दिनुहोस्।
केस स्टडी पनि यस योजना अनुसार काम गर्दछ। यदि एक विक्रेताले तपाईंलाई एक कथन वा पूर्ण केस स्टडीको लागि सोध्दछ भने, हो भन्नुहोस्। तपाईंसँग तपाईंको शीर्षकहरूको लागि नयाँ प्लेटफर्म उत्पन्न गर्ने अवसर छ र लिंक हुनेछ।
Men. विशेषज्ञहरु उल्लेख गर्नुहोस्
दिल मा हात, हामी सबै हाम्रो विषय क्षेत्र मा विशेषज्ञको रूपमा चित्रण गर्न चाहन्छौं। तपाईको क्षेत्रका विज्ञहरू पनि त्यस्तै छन्। B2B र औद्योगिक क्षेत्रमा, उदाहरणका लागि, यी प्रोफेसरहरू, स्पिकरहरू, प्रबन्ध निर्देशकहरू, व्यवस्थापन सल्लाहकारहरू, वा तपाईंको ग्राहकहरू हुन्। यी विशेषज्ञहरुलाई विशेष विषय मा एक बयान बनाउन को लागी सोध्नुहोस् र त्यसपछि यसको लागि सामग्री बनाउनुहोस्।
यस सामग्रीमा तपाईंको विज्ञ र उनको कथन उल्लेख गर्नुहोस् र त्यसपछि उसलाई सचेत गराउनुहोस् कि तपाईं उसलाई आफ्नो विशेषज्ञ लेख वा प्रकाशन मा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, तपाईंको सम्बन्धित विशेषज्ञको होमपेजमा लिंक नगर्नुहोस्, तर तिनीहरूको लिंक्डइन वा Xing प्रोफाइल। त्यसो भए तपाईले उसलाई सामग्री कम्पनीको वेबसाइटमा लिंक गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि समाचार वा आफ्नै ब्लग पोष्टमा।
B2B लिंक निर्माणको महत्त्वलाई दिँदै, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंको साइट वा ब्रान्डको प्रबर्धन गर्न रणनीति सेट अप गर्न हामीले सहयोग गरेका छौं। जे होस्, हामी तपाईंलाई तपाईंको साइटको लागि उपयोगी र लाभदायक परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि तपाईंको SEO अभियानहरू ठीकसँग सञ्चालनको महत्त्वको सम्झना गराउन चाहन्छौं।
त्यो किन हो Semalt को पेशेवर सेवा तपाइँको साइट र खोज परिणामहरूको शीर्षमा पुग्नको लागि तपाइँको ब्रान्ड र SEO लाई बढावा दिनको लागि सबै विकल्पहरूको प्रस्ताव गर्दछ।
सबैभन्दा माथि, हामी तपाईंलाई हाम्रो साइटलाई नि: शुल्क धन्यवादको लागि विश्लेषण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं नि: शुल्क विश्लेषण उपकरण जसले तपाईंलाई तपाईंको साइटको हालको राज्यको सटीक विचार गर्न अनुमति दिन्छ।